साउनमा नयाँ व्रत बस्नेहरुका लागि अत्यन्तै शुभ, धनदेखि सन्तानसम्म प्राप्त हुने विश्वास !! « गोर्खाली खबर डटकम
साउनमा नयाँ व्रत बस्नेहरुका लागि अत्यन्तै शुभ, धनदेखि सन्तानसम्म प्राप्त हुने विश्वास !!
श्रावण १ गते बिहिवार तथा कृतिका नक्षत्रबाट महिना प्रारम्भ भएको छ । यसैदिन कामिनी एकादशी व्रत समेत परेको छ । हिन्दूहरुको लागि श्रावण महिना विशेषगरी शाकाहारी भएर महिनाभरी आराध्यदेव भगवान् महादेवको पूजा तथा बोलबम जाने परम्परा सदीयौंदेखि चलिआएको छ । यसै दिनदेखि सूर्य उत्तरी गोलार्धबाट दक्षिणी गोलार्धमा प्रवेश गर्नेछन् । साउन १ गतेबाट विस्तारै दिन छोटो र रात लामो हुँदै जाने छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :साँढेले ४ तोला सुन खाएपछि भोलिपल्ट बिहान यस्तो भयो …!!!मानिस आफ्नो मिहेनतको कमाईबाट घर बनाउछन् र आफ्नो आवश्यक चीन जोड्दै जान्छन् । त्यस्तै महिलाहरुले आफ्नो लागि विशेष त सुन चाँदीका गहना जोड्छन् । त्यही दुः खले जोडेको सम्पत्ति एउटा साढेले खाइदिएको छ । भारतको हरियणाको घ ट ना हो ।जनकराज नामका व्यक्तिको घरमा भएको घ ट ना हो जहाँ सासु र बुहारीले आफ्नो गहना बटुकामा राखेर तरकारी काट्दै थिए ।
भुलबस बटुकाको तरकारीको फोहोर कुँडोमा फालिदिए । कसैलाई या द नै भएन की बटु कोमा सुनका गहना थिए ।सिसिटिभीबाट पत्ता लागेको छ साँढेले कुँडोको पानी खायो र गहना पनि निल्यो । साँढेले ४ तोला सुन निलेको छ । प शु चिकि त्सकलाई खबर गरेर उक्त साँढेलाई घरको नजिक राखेका छन् । उसको दिशामा गहना भेटिने आशाले साँढेलाई खान दिएर राखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति प्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दुः ख ब्यक्त !!!पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशभर बाढी प हिरोले पुर्याए को क्ष तिप्रति दुः ख ब्यक्त गरेका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले देह्स्का विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट धेरैले ज्या न गुमाएको, घाईते हुनु परेको, आफ्नो घर, गोठ तथा जायजेथा गुमाउनु परेको र धेरै घरवार विहिन भएको सुन्दा, देख्दा र बुझ्दा आफु अत्यन्त दुखित भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘ यो बर्षको बर्षातको कारण हाम्रो देशको हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट धेरैले ज्यान गुमाएको, घा ईते हुनु परेको, आफ्नो घर, गोठ तथा जायजेथा गुमाउनु परेको र धेरै घरवार विहिन भएको सुन्दा, देख्दा र बुझ्दा म अत्यन्त दुखि त भएको छु ।’उनले यो दु ख को स्थितिमा सबैबाट सबैको राहत, उद्धा र र उपचार होस् भन्दै विनासको यो बेला पर्याप्त सहयोग, सुब्यवस्था तथा नि गरा नी पुगोस् भन्ने आग्रह गरेका छन् ।